အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အသားအရေကိုလှပစေသော သစ်သီးများ
33 Responses to “အသားအရေကိုလှပစေသော သစ်သီးများ”
ဒါ့ကြောင့် မေပယ့်အသားအရေလေးတွေ စိုပြေ ၀င်းမွတ်နေသလား မသ်ိ
အသားက မဲတာဆိုတော့ ဘာလုပ်လုပ်မဖြူတော့ပါဘူးဗျား)
thanks thz thz thz
တစ်လုံးစီ လှီးစားရမှာ ပျင်းလို့ သီးစုံဖျော်ရည်ပဲ ဝယ်သောက်လိုက်တယ် ဒန် တန် တန်
တို့အသားအရေကတော့ ဘာပဲစားစား မရတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ကွယ် ......
မ ချောရေ့ 
ကျ ကျွန်တော်တို့ ပါသုံးလို့ ရလားမသိဘူး နော်။
အင်း....ဂလိုလား အားလုံးကိုအရည်ဖျော် သောက်ဦးမကွဲ့နော် :)
အားလုံးပိုကောင်းသွားအောင် အဲ့ဒါတွေ အားလုံး ဗိုက်ထဲပဲ ပစ်ထည့်လိုက်တော့မယ်ချောရယ် ... မကောင်းဘူးလားး))
အသီးတွေစားရတာကြိုက်ပေမဲ့ လိမ်းရင်တော့ ပျစ်ချွဲချွဲစီးကပ်ကပ်ကြီးနေမှာ..
အရမ်းအရမ်းကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ်လေးး)))
မျက်နှာပေါ်မတင်ဘဲ ပါးစပ်ထဲဘဲ ထည့်မယ်ဆို ပိုကောင်းမယ်နော် ..
လှချင်ရက် စက်စက်ယိုလေ ဒီက...၊ ဒါပေမဲ့ စိတ်လျှော့လိုက်ပါပြီကွယ်၊ အသီးမြင်ရင် စားဖို့ပဲ စိတ်က တွေးမိတာ...:)
.com ဖြစ်တော့ မန့် ရတာ ခက်ထာ...... Ma KOM ဘာကိုအားကျတယ်မသိ.. :D
just funny! :P
သခွားသီးကိုတော့ ကြိုက်၏ ...
အသီးဈေးက ကြီးကြီးနဲ့ ကိုယ်အရမ်း
အီးးး မိန်းကလေးတွေ အတွက်ပဲတဲ့ မချော မတရားဘူး ယောက်ကျာလေးတွေအတွက်ကျတော့ မရေးထားဘူးး))))
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းလေး ချောေ၇။ ချောက ကိုယ့်ဆီ ရောက်နေပေမယ့် ကိုယ်က မရောက်ဖြစ်ဘူး။ အလုပ်ရယ်၊ ကွန်ရယ်၊ လူရယ် လုံးချာလည်နေတာနဲ့ပဲ ဘယ်မှ မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နေကောင်းတယ်ဟုတ်။ စီပုံးတွေကလည်း မမြင်ရတာ တစ်နှစ်လောက်ရြှိပီလေ။ လာရေးလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပိုစ့်တိုင်းကို ကိုယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မေးလ်မဝင်တော့ မမန့်ဖြစ်တာ။ သယ်ရင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ။ ဒီဇင်ဘာတွေ အထပ်ထပ်ထွေးထားပြီးရင် နှစ်သစ်တွေတိုင်းကို လန်းဆန်းစွာ ကြိုဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါစေနော်။
စားဖို့တောင် အနိင်နိင်... ဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်တိုင်း ဝယ်ဖို့မေ့မေ့သွားလို့။
အလှအပ မြတ်နိုးသူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် ပို့စ်လေးပါပဲ။
အကုန် တော့ မစားဖူး ဘူး
ဖရဲ သီး ကြိူက်တယ်
အသီးတော်တော်များများကို စားဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီးကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ ဒါပေမယ့် စပျစ်သီး အကြောင်း မပါဘူးနော်...
ထောပတ်သီး က ဈေးကြီးလွန်းလို့ ချန်ထားခဲ့တာလား ?
သစ်သီးဆိုလဲ စားတာပဲဗျာ ဘာမှမကြိုက်တာမရှိဖူးရယ်
မမချောရေ အခုမှပဲ မန့်လို့ရသွားတော့တယ် အလှအပ အကြောင်းဆိုရင် များများတင်ပါနော် ယမင်းကအရမ်းအလှကြိုက်တာ ....မိန်းကလေးဆိုတော့ ခိခိ